Ny Kibay sy ny Barany, Berlin dia tena manan-karena sy nitso-drano toy ny tsy misy hafa tanàna ao Alemaina, ary nisokatra ho any Berlin na ny mpitsidika an-Drenivohitra ny vintana tsara indrindra, tanteraka mora ny vehivavy mba hahafantatra. Koa satria ny toe-javatra dia vielblütig, ary zara raha ny Fikambanana toy ny olon-kafa, ao amin’ny hazakazaka ho iray mialoha fifantenana ny fivoriana. Afaka Orient Dia ny nanorina toeram-pivavahana, izay manana ny fanampiny soa ny mafy ny fifamoivoizana, ary matetika ny fidirana maimaim-poana ho an’ny vehivavy. Ny ‘vata’ ny faharoa-Toerana ho an’ny Trano, Techno ary ny Electro, miaraka amin’ny adiresy vaovao ao amin’ny teo aloha toby Mitte amin’ny Köpenicker Straße. Eto Ianao hihaona, indrindra fa ny vehivavy miaraka amin’ny matanjaka dia matanjaka. Ny ‘Watergate’ ao Kreuzberg manolotra Anareo ao amin’ny vao mangiran-dratsy, dia ny hijery ao amin’ny Spree renirano. Ny manontolo Berlin-Panorama Ianao, dia hiaina ao amin’ny Secondos’ ny avo ao an-Sony Center ao amin’ny Potsdamer Platz.
Ny tsara indrindra dia ny fahatsapana ny ‘mpahay’ afaka soa aman-tsara ny mampihatra ny Matrix Club eo Warschauer Platz. R’n’B, Funky, sy ny er, disco trano, dia ny Vato sy ny Pop maro Gorodona — mbola toy tanteraka izany, tsy misy maniry. noho ny tsy dia tanora antoko-goers misy ihany koa ny ‘fahatsiarovana’, rehefa avy rehetra, koa ny rihana, dia hei mozika. Izay te-handresy ny ‘mafana vatolampy ampakarina’, ‘olon-kendry’ ny Heinrich-Heine-Straße dia tsara — amin’ny wildest Vatolampy Antoko ao Berlin amin’ny Rocky Horohoro fandaharana.
Misy be dia maro be ny vehivavy any Berlin, aiza aho no hihaona amin’ny Zo iray
ny halavany izy lazan’ny Salsa sy Karaiba ny Fikambanana dia miha-mitombo, tahaka ny ‘Soda’ ao amin’ny ‘schönhauser Allee’, ‘A-fandraisam-bahiny’ ny Karl-Marx-Allee na ny ‘Disco Havana’ ao Schönberg, ankoatra ny Salsa sy ny Merengue, R B, Funk sy ny Fanahy dia nilalao. barhaupt ny Fikambanana dia mbola manana ny ‘B-kilasy’ ny fandaharana, amin’ny Trano Mandihy. Izay tia Retro, izany no tanteraka, dia afaka misafidy ny roa Tafahoatra: Ny taloha ny tsara ‘Big Edena’ any amin’ny faritra Andrefan’ny Tanàna exudes ny hatsarany ny glittering Glamour izay mahasarika voalaza koa mbola ny Fiaraha-monina Avo. Ny fomba hafa manodidina, dia tao ny ‘club’ ny Repoblika’ ao Prenzlauer Berg — olona antonontonony amny’ny mpia Kitsch sy ny fivavahana, Natao tao GDR.
Ary avy eo dia misy foana ny Miaina-mozika-Fikambanana toy ny ‘Quasimodo’ N U-Zoo station na ny ‘Bar jeder Vernunft’ ny schaperstraße.
Fa tags afaka hahalala ny hoe ‘olona’ ho an’ny vehivavy ao Berlin, satria ny tanàna kilaometatra ny nametra-indray nitsangantsangana. Unter den Linden, ny Gendarmenmarkt na ny Potsdamer Platz soa aman-tsara ny faritra amin’ny vehivavy izay tia ny mandeha, ary koa ny fanasana ny Café tsy mandà
← Finday amin'ny chat avy amin'ny finday
Online tranonkala fifaneraserana →